~ IT Guide Myanmar
7:34 AM OFFICE, Social Media Image Maker, Viber နှင့်ပတ်သက်သမျှ No comments
KMSpico v.4.6 Final – Activator for Windows and Office Products
Posted: 09 Jul 2013 03:05 AM PDT
Microsoft Office 2010/2013 နဲ့ Window Vista , Window7, Window 8 စတာတွေအားလုံးကို Activate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ KMS PICO နာမည်နဲ့ Activator လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အတော်လေးကို အ သုံးတည့်စေမယ့် Activator လေးတစ်ခုဖြစ်လို့ တွေ့တုန်းလေးယူထားစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေး ကို အသုံးပြုဖို့အတွက် Net Framework 4.0 ရှိထားမှ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေး Activate လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Window Version အတိအကျ ကိုတော့ အောက်မှာရေးပေးထားပါတယ်ဗျာ။
KMSpico 4.6 is the ideal tool to activate the final version of Windows 7/8 and Office 2010/2013. Activator does not require user intervention, the entire activation process takes place in the background, just run the activator andacouple of minutes to check the activation status of Windows and/or Office.
Change Log v4.6:
- Fixed Notification Mode.
- Fixed Service.
Viber Free Messages & Calls 3.0.2.5 (Latest Version)
Posted: 09 Jul 2013 02:02 AM PDT
ယူစွမ်: အစ်ကို Free Call Viber လေးများရှိရင်တင်ပေးပါလား အဟောင်းတွေကမကောင်းတော့လို့ပါ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ အမြဲတမ်းအားပေးလျှက်ပါ..။
4 July 2013 နေ့ကထွက်တဲ့ နောက်ဆုံး Update Version လေးကို လိုအပ်သူများအားလုံးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်...။
Viber apk allows you to text, call, and send photos and video messages worldwide for free to over 200 million users using 3G or Wifi. Viber is available for Android, iPhone, Blackberry, Windows Phone and many more devices and platforms.
Click Here to Download (ဒီ ၀က်ဆိုက်ဒ်က Software တွေ မဒေါင်းတတ်ဘူးဆိုရင် ဒီ Video လေးကို ကြည့်ပေးပါ )ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...။
Social Media Image Maker ဖြင့် လူမှုကွန်ယက်များအတွက် ပုံများကို အကောင်းဆုံးပြုပြင်နိုင်
Posted: 09 Jul 2013 12:40 AM PDT
Facebook သုံးစွဲသူများ အနေဖြင့် မိမိ၏ Profile တွင် တင်ထားသော Cover Photo သည် အပြည့် မပေါ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်း အုပ်စုလိုက် ရိုက်ထားသော ပုံများ လိုသလို ပုံမထွက်ခြင်း၊ ဆွဲဆန့် ထားသလို ဖြစ်နေခြင်း များကို ကြုံတတ် ကြသည်။ Graphic ဒီဇိုင်း ပိုင်းကို တီးမိ ခေါက်မိ ရှိသော နားလည်သူ တို့သာ ၄င်းတို့၏ Cover Photo နှင့် Profile Picture တို့ကို သတ်မှတ် ထားသော Resolution အတွင်း ၀င်အောင် ပြုပြင် တတ်ကြသည်။ သို့အတွက် ဒီဇိုင်း ပိုင်းနှင့် လက်လှမ်း မမီသော အသုံးပြုသူ အများစု အတွက် အဆင် ပြေအောင် ကူညီပေးရန် လွှင့်တင် ထားသည့် Social Media Image Maker သည် နာမည်ကြီး Social Media များ၏ ဓာတ်ပုံများ အတွက် အထောက်အပံ့ ပေးပြီး ၄င်းအား အသုံးပြု ရသည်မှာ အလွန် လွယ်ကူသည်ဟု သိရသည်။ အထူးသဖြင့် Cover Photo နှင့် Profile Picture တို့ကို ကြည့်ရှုရ အတော် အဆင်ပြေ စေရန် ပြုပြင် ပေးနိုင်သည်။
Social Media Image Maker က အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်သော Website များမှာ Facebook, Twitter, YouTube, Google+, Flickr, Vimeo, Pinterest, Skype, Tumblr, Linkedin, Gravatar, Xing, Viadeo, Slideshares, Foursquare နှင့် About.me တို့ဖြစ်သည်။
Social Media Image Maker ကို အသုံးပြုလိုပါက Register ပြုလုပ်ရန် မလိုအပ်ခြင်း၊ ၀န်ဆောင်ခ တစုံတရာ ပေးရန် မလိုအပ်ခြင်း တို့က အသုံးပြုသူများ အတွက် ပိုမို အဆင်ပြေစေသည်။ ၄င်းကို အသုံးပြုလိုပါက အောက်ပါ Link တွင် သွားရောက် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Credit to : http://itnews.credowave.com